Zaporozhye State University Medical - MBBS Study in Ukraine
Medical Zaporozhye State University Details
gaabinta : ZSMU
aasaasay : 1903
Ha iloobin in aad wada hadlaan Zaporozhye State University Medical
Codso in Zaporozhye State University Medical
Ujeedada ugu weyn ee Jaamacadda Zaporozhye State Medical waa in ay bixiso waxbarasho caafimaad sare ee takhasuska ee, darajo Bachelor iyo Master ee, iyo sidoo kale tababarka ee internship, mastership, waxbarasho postgraduate, deganaanshaha iyo kororsi koorsooyin loogu talagalay dhakhaatiirta iyo farmashiistayaasha.
Waxaa jira 7 Caqlina at Zaporozhye State University Medical ah (Caafimaadka Kuliyada No. 1, Caafimaadka Kuliyada No. 2, laba kulliyadood Pharmaceutical (aardayda iyo extramural), International Kuliyada No.1, International Kuliyada No.2, Kuliyada wadashada waxbarashada), Medical College iyo Clinic University for 160 bukaanka iyo 250 la-talinta ee Rugta caafimaad.
Tababarka ayaa Jaamacadda ka mid ah pre-jaamacadeed, muddooyinka undergraduate iyo postgraduate waxbarasho. ardayda Dibadda waxaa loo tababaray ee Kuliyada No.1 Caalamiga ah ee waxbarashada dheeraad ah ee hay'adaha waxbarashada sare ee Ukraine.
Intii lagu guda jiray tababarka jaamacadda labada ardayda Ukraine iyo shisheeye u helaan waxbarasho sare, waayo darajo Takhasus iyo Master ee ("General Medicine", "Caruurta", "Ilkaha", "Farmashiyaha", "Technology of diyaarinta Cadar-qurxinta").
waxbarashada wadashada ka mid ah tababar ku internship, mastership iyo waxbarasho sarre oo xagga 29 taqasusyo, in musharaxnimada phD - in 12 taqasusyo, iyo sidoo kale koorsooyinka kororsi waayo, dhakhaatiirta iyo farmashiistayaasha.
10200 ardayda, postgraduates, interns, ardayda koorsooyinka kororsi, macallimiinta-probationers, sayid iyo dadka caafimaad bartaan Jaamacadda. Waxaa jira in ka badan 1800 ardayda ajinebiga ah ka 42 dalalka Jaamacadda. 1024 ardayda waxaa la baraa in English. University ayaa helay amar iyo aqoonsi by tababar muwaadiniinta shisheeye Asia ka, Africa, Latin Americaand Europe muddo ka badan 40 sano. About 10500 khabiiro ku helay waxbarashada caafimaadka iyo dawooyinka oo hadda ka shaqeeya wax ka badan 100 dalalka dunida, qaato jagooyinka sare ee nidaamka caafimaadka dadweynaha ee dalalkooda.
At University Medical Zaporozhye State ardayda aqoon ku xiran shuruudaha nidaamka Yurub ee waxbarashada. The manaahijta waxbarashada ku saleysan yihiin lagu daydo ugu fiican ee dhaqanka hooyo iyo dibadda oo tababar takhasus '.
Ardayda, iskaabulo, interns, sayidkooda, postgraduates, macallimiinta u shaqeeya degree Doctor ayaa sidoo kale ardayda kororsi waxbarasho koorsooyinka at 59 waaxyaha. 56 waaxaha waxaa madax u Professors / Dhakhaatiirta ee cilmiga, 3 waaxaha waxaa madax u Professors Associate / PhD. Tababarka ayaa waxaa lagu fuliyaa iyadoo la isticmaalayo mid ah farsamooyinka sayniska iyo waxbarashada ugu casrisan.
Waxaa jira 676lecturers at University ee 2014: 120 Macalimiinta iyo Dhakhaatiirta of Sciences, 444 Professors Associate iyo PhD ku hawlan yihiin in shaqada sayniska-waxbarasho. Waxaa jira mid ka mid ah xubnaha ka dhiganta of Academy Qaranka ee Sayniska ee Ukraine, 46 xubno ka mid ah International tacliinta sare ee Sciences iyo International Sayniska Societies, 8 Sharafeedka Science iyo Engineering Shaqaalaha of Ukraine, 1 shaqaalaha sharafeedka Higher School of Ukraine, 4 State Prize Winners, 5 Prize Winners ee Academy Yukreeniyaan of Medical Science, 1 Guulaystey Prize ee Academy of Sciences Qaranka iyo Academy of Sciences Medical magacaabay ka dib markii V.P. Komisarenko, 1 Guulaystey Prize Madaxweynaha Ukraine, 2 Guulaystey Prize oo ka mid ah Golaha Wasiirada ee Wasaaradda Ukraine, 3 Dhakhaatiirta sharafeedka Ukraine iyaga ka mid ah.
The dugsiyada sayniska ee Jaamacadda waxaa si fiican u yaqaan baxsan Ukraine. cardiological, qalliinka, dugsiyada dawooyinka iyaga ka mid ah waa. Waayo, markii ugu horeysay ee Ukraine ee ku takhasusay of Zaporozhye State University Medical ayaa si guul leh oofiyo transplantations ee wadnaha. In ka badan 500 transplantations beerka, kelyaha iyo xammeetida ayaa la sameeyey. In ka badan 20 diyaar garowga ayaa la soo shaqeeyay soo baxay by saynisyahano dugsiga dawooyinka, soo saaray oo keenay dhaqanka caafimaad ee dalal badan oo dibadda. Natiijada shaqada sayniska ayaa laga soo sheegay goobaha caalamiga ah ee Sweden, Czech Republic, Spain, Holland, Brazil iyo Austria. Jaamacadda waxay leedahay koob ee ay sayniska u gaar ah: “Zaporozhye Medical Journal”, “arrimaha hadda ku sugan farmashiyaha iyo daawo:sayniska iyo dhaqanka”, “pathology”.
Waxaa jira kaabayaasha a horumariyo qaybaha sayniska ee jaamacadda oo ay ku jiraan SRI (Sayniska Machadka Cilmi- ) dhibaatooyinka caafimaadka ee deegaanka dabiiciga ah iyo, Institute of cudurada caafimaad ee nin, SMA "Pharmatron", dhexe shaybaarka cilmi sayniska, shahaado-jirrabaya shaybaar oo cadar iyo qurxinta diyaarinta iyo waxyaabaha qoyska, waaxda of musharaxnimada phD iyo waxbarasho postgraduate, waaxda daabacaadda tifaftirka, Center ee informatics iyo taageero gorfaynta iyo imtixaanka, waaxda patent, qeybinta cilmi sayniska, adeegga METROLOGY. Sayniska Machadka Cilmi Baarista iyo shaybaarada waxaa lagu qalabaysan xarumaha gaarka ah ee samaynta asaasiga ah iyo codsatay cilmibaarisyadii sayniska.
Waxaa jira Golayaasha Gaarka ah ee Guddiga Ogeysiin sare ee difaaca Musharaxa iyo Doctor Shahaadooyinka ee u gaarka ah oo kala duwan. 30 theses for degree Doctor ee 23 gaarka ah iyo 143 theses for degree Musharax ee 35 gaarka ah ayaa difaacay at University inta lagu guda jiro shanta sano ee la soo dhaafay. 35 theses darajo Doctor iyo 137 theses for degree Musharax ee lagu rumoobay cunay University sidii qorshaha diyaarinta takhasusay sayniska iyo waxbarashada. University wuxuu daabacaa joornaalada sayniska iyo wax ku ool ah wareegsan:"Joornaalka caafimaadka Zaporizhzhia", "Pathology", "Arrimaha hadda ku sugan farmashiyaha iyo daawo:sayniska iyo dhaqanka ", 10-15 sayniska-cilmi-baarista iyo wax ku ool ah shirarka All-Yukreeniyaan qayb caalamiga ah waxaa la qabtaa sanad walba.
sal-dhigida ee teknoolajiyada computer galay habka waxbaridda-baareen, cilmi sayniska iyo maamulka waa mid ka mid ah hawlaha University muhiimadda-driven ee. 42 fasalada kombiyuutarka iyo 1300 PC ardayda la siiyo manhaj waxbarasho oo ku salaysan teknoolajiyada multimedia oo ay gacanta ku imtixaanka ee nidaamo ugu weyn. ZSMU leeyahay server Internet macluumaad gaar ah. Waxaa jira xarun of telemedicine iyo masaafada waxbarashada Jaamacadda kaas oo bixiya ka qaybgalka shirarka caalamiga ah ee sayniska qabtay ku salaysan teknoolajiyada muuqaal, urur iyo burburiyaha ah Vocaroo sayniska-hababka, Ururka masaafada koorsooyinka kororsi ah shaqaalaha cilmiga University, isticmaalaya tiknolojiyada fog ee tababarka ardayda by warqadihiisa.
Zaporozhye University Medical State waa qayb ka mid ah barnaamijka International Tempus. Sida laga soo xigtay deeq TEMPUS IV University buuxiyo barnaamijka «Dhismaha caalamiga ah ee Network supra-Regional ee Xarunta Qaranka ee Waxbarashada Caafimaadka, diiradda PBL iyo Virtual Bukaanka », wadashaqayni xarun la aqoonsan yahay af College of Canadian luqadda Ingiriisiga (Vancouver, Canada) si loo horumariyo luqadda Ingiriisiga ee online mode.ZSMU heshiisyo iskaashi on saxiixay Kirov State Medical Academy, West Kazakhstan Marat Ospanov State University Medical, Andijan Institute Medical State (Uzbekistan), Astana University Medical (Kazakhstan), Karaganda University Medical (Kazakhstan), University Aristotle ee Thessaloniki (Greece), St. George University of London (Boqortooyada Ingiriiska), Jiid Tsereteli State University (Georgia), David Tvildiany University Medical (Georgia), Wroclaw University Medical (Poland), University Palacky in Olomouc (Czech Republic), Jaamacadda Nicosia (Cyprus), I.M. Sechenov First Moscow State University Medical (Russia), Grodono State University Medical (Belarus), RīgaStradiņš University (Latvia),Pyatigorsk Pharmaceutical Institute (Russia), Plovdiv University Medical (Bulgaria), Lithuanian University of Sciences Caafimaadka (Lithuania).
Zaporozhye University Medical State qaadataa mid ka mid ah meelaha ugu horeeya ee Ukraine ee sahayda farsamo-wax. sharafta The of University waxaa la aasaasay by helitaanka xarumaha tababarka u gaar ah. Zaporozhye University Medical State waa mid ka mid ah hay'adaha yar caafimaad sare waxbarasho ee Ukraine in uu leeyahay ay xarunta tababarka-cilmiyeed u gaar ah "University Clinic" taas oo fasalada wax ku ool ah ayaa la sameeyay oo gargaar caafimaad loo gacangeliyey. Jaamacadda waxay leedahay qalabka gaar ah: tomographs computer, qalabka lagu ogaado ultrasonic, baaris angiographic iyo endoscopic, cudurka radioisotope iyo kuwo kale oo badan si ay u qabtaan asaasiga ah iyo codsatay baaritaan cilmiyeed.
Waxaa maktabadda elektarooniga ah iyo buugga elektaroonikada ah ee maktabadda sayniska ee Jaamacadda. users The ay heli karaan database elektarooniga ah ee maktabadda oo qaadi karaan Baadhaha kombiyuutar kasta ee ku xiran internetka iyo hesho buuxa text-buugaagta.
Zaporozhye University Medical State eg campus arday on bangiga picturesque ee Dnieper webiga a, webiga ugu weyn ee Europe. Waa dhul go'ay on taas oo ay jiraan 5 dhismayaasha waxbarasho ee, 5 hostels, sayniska iyo maktabadaha belletristic suugaanta la hoolalka akhriska iyo qol computer, rugta caafimaadka, sanatorium-dispensary ardayga, dhowr kantiinada iyo makhaayadaha, xarunta isboortiga, maxkamadaha iyo stadium. Waxaa jirta kooxda fanka hiwaayadda ardayda ayaa isha ku gabay, oo cayaaraya alaabtii muusikada. Xisbiyada taariikh iyo dhaqan Ukraine, ciidaha of saaxiibtinimo oo caalami ah, Xisbiyada tartanka waxaa lagu qabtaa ZSMU.
dhismaha tacliinta All, hostels, maktabadda sayniska ay heli karaan Internet. Waxaa jira dhibcood helaan Wi-Fi at dhulka ee Jaamacadda. campus Ardaygu waa ka yar oo ka mid ah ammaanka University wareega-the-saacad. The campus iyo hostels waxay leeyihiin hab of ilaalo video iyo gacan ku haynta.
habka Admission in Zaporozhye State University Medical
Wixii khuseeya ardayda shisheeye University Medical Zaporozhye State leeyihiin in ay codsan online via Center Admission Ukraine.
General Medicine. Qualification: MD Dhakhtarow. muddo Tababarka – 6 sano.
Pediatrics. Qualification: dhakhtarka. muddo Tababarka – 6 sano.
Baadhista xanuunada Laboratory. Qualification: Laboratory kaaliyaha bachelor. muddo Tababarka 4 sano.
Nursing. Qualification: kalkaalisada bachelor Medical. muddo Tababarka 4 sano. At Pharmaceutical ardayda awood loo tababaray for gaarka ah:
Farmashiyaha. Qualification: Farmashiistaha. muddo Tababarka 5 sano.
Technology of preparations.Qualification cadar-qurxinta: cosmetologist Farmashiistaha. muddo Tababarka 5 sano.
Taariikhda Zaporozhye State University Medical yimaado u Koorsooyinka Women barbaarinta abaabulay in Odessa ee dib u 1903.
In 1921 Koorsooyinka waxaa lagu habayn galay Chemical-Pharmaceutical Institute.
In 1935 waxaa loo habeeyay in Institute Pharmaceutical Gobolka. In 1941 nolosha Machadka kala gooyey by dagaalka Great Patriotic ilaa 1944.
In 1959 Machadka Pharmaceutical waxaa laga soo wareejiyay Odessa in Zaporozhye iyo baxshay in Zaporozhye Pharmaceutical Institute.
In 1964 Kulliyadeeda Caafimaadka oo la furay iyo 1968 Zaporozhye Pharmaceutical Institute waxaa magacooda loo baxshay galay Institute Medical Zaporozhye.
In 1975 Machadka Caafimaadka Zaporozhye helay xaaladda ka mid ah Institute of category ugu horeysay.
In 1994 Machadka waxaa habayn galay University Zaporozhye State Medical of IV (hogaanka) heerka aqoonsi.
Haddaba waxaa ka mid ah mid ka mid ah Jaamacadaha Medical taasoo keentay in nidaamka waxbarashada caafimaad ee Ukraine. Waxa uu noqday xarunta tababarka ah ee ku takhasusay caafimaadka iyo dawooyinka for Ukraine iyo dalal shisheeye.
Ma rabtaa wada hadlaan Zaporozhye State University Medical ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Zaporozhye State Medical on Map
Photos: Zaporozhye State University Medical rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Medical Zaporozhye State
Ku biir si ay ugala hadlaan of Zaporozhye State University Medical.